आज मिति २०७७, फागुन ९ गते आइतबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, फागुन ९ गते आइतबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:५० February 21, 2021 काठमाडौं डेष्क
मेष : तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। हाल तपाईंको व्यक्तिगत जीवन तपाईंको ध्यानको प्रमुख कारण भएको छ – तर आज तपाईं सामाजिक काम, दान र तपाईंसँग समस्या लिएर आउनेहरूको मद्दत गर्नमा केन्द्रित हुनुहुनेछ। सामाजिक बाधाबाट छुटकारा पाउन असमर्थ। आज आफ्नो जोडीसँग अन्य मान्छेको हस्तक्षेपले तपाईंको सम्बन्धमा हानि पुर्याउन सक्छ।
वृष : दिन व्यस्त भए तापनि स्वास्थ्य ठीक रहनेछ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरूले सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। रोमान्सका लागि राम्रो दिन। आज तपाईंका वैवाहिक जीवन मामलाका कुराहरू साँच्चै रमाइला हुनेछन्।
मिथुन : स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। सबै आज तपाईंका मित्र हुन चाहन्छन् – र तपाईं स्वीकार गर्न निकै खुसी हुनुहुनेछ। आफ्नो ऊर्जा र आवेगको कायापलट गर्न खुशियाली यात्रामा जाने सम्भावना छ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
कर्कट : मोतीबिन्दुका विरामीहरुले प्रदूषित वातावरणमा जानु हुँदैन किनकि धूम्रपानले तपाईंको आँखालाई धेरै क्षति पुर्याउन सक्छ। यदि सम्भव छ भने घाममा धेर नहेर्नुहोस्। सफलताको लागि आजको सूत्र नवीन विचारधारा र राम्रो अनुभव भएका मानिसहरूको सल्लाहमा आफ्नो पैसा राख्नु हो। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको जीवनमा एउटा विशेष ठाउँ ओगट्नेछन्। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित राख्न सक्छ।
सिंह : सानो कुराले आफ्नो मनमा चिन्ता गर्न नदिनुहोस्। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
कन्या : तपाईंको तेज कार्यले तपाईंको धेरै दिनदेखिको समस्या समाधान हुनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि – तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्। तपाईंको प्रेमी जीवनले आज सुन्दर रूप लिनेछ। तपाईंले प्रेममा हुनुको स्वर्गीय भावना प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज आफ्नो शानदार जोडीको न्यानोसँग तपाईंलाई रोयल्टी झैं महसुस हुनेछ।
तुला : कार्यस्थलमा वरिष्ठबाट दबाव र घरमा कलहले केही तनाउ ल्याउन सक्छ – जसले तपाईंका कामको एकाग्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। आफन्तहरू र साथीहरूलाई तपाईंको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नदिनुहोस्, नत्र तपाईंले चाँडै आफ्नो बजेट उँचो पाउनु हुनेछ। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। आज, तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरको प्रेममा तपाईंले जीवनको पीडा बिर्सनुहुन्छ भन्ने अनुभव हुनेछ।
वृश्चिक : तपाईंको छिट्टो रिसाउने बानीले तपाईंलाई केही समस्यामा पार्न सक्छ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। तपाईंको जोडी आज धेरै आत्म केन्द्रित हुन सक्छन्।
धनु : स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस र वस्तुहरू क्रमबद्द राख्नुहोस्। तपाईं आज आफ्नो पैसालाई लिएर समस्यामा पर्नुहुनेछ – तपाईंले बढी खर्च गर्नुहुन्छ वा आफ्नो वालेट गलत ठाउँमा राख्नु हुनेछ – बेवास्ताले गर्दा केही घाटा निश्चित छ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। आफ्नो छिमेकीले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा समस्या बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसले तपाईंहरूको प्रेमको बन्धन हल्लाउन गाह्रो छ।
मकर : तपाईं आफ्नो सोखको लागि वा तपाईंलाई सबैभन्दा आनन्द लाग्ने कुरा गर्न आफ्नो अतिरिक्त समय खर्च गर्नुपर्छ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। आज प्रेम नभएको महसुस हुन सक्छ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई कतै घुमाउन लिएर जानु भयो भने, तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ।
कुम्भ : डरले तपाईंको आनन्द बिगार्न् सक्छ। तपाईंले यसलाई आफ्नै विचार र कल्पनाको उत्पादन हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। यसले स्वेच्छाको हत्या गर्नेछ – बाँच्नुको आनन्दलाई मार्दछ र तपाईंको दक्षतामा बाधा दिनेछ – यसै कारण तपाईंलाई यसले कायर बनाउनु अघि यसको बीउ नै मारिदिनुहोस्। आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। मित्रता गहिरो हुँदै गएपछि रोमान्स आफैं त्यहाँ आउँछ। आज, तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर गएर रमाइलो समय सँगै बिताउनु हुनेछ।
मीन : मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ – तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
पहिलो पटक विषादी अवशेषको अधिकतम सिमा निर्धारण, कुन फलफूल र तरकारीमा कति ?